ဝ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် UWSA တပ်သားတွေကို တွေ့ရစဉ်
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းလားအထူးဒေသ ၄ မှာ UWSA ဝ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ အစိုးရ တပ်မတော်တို့ စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေတဲ့အတွက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား တချို့ နေရပ်ပြန်နေကြတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
မြို့ပေါ်မှာတော့ ပုံမှန်သွားလာနေကြပြီး စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့် ပြည်မဘက်က လာရောက်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတချို့တော့ ပြန်ကုန်ကြတယ်လို့ မိုင်းလားမြို့မှာ ၃ နှစ် ကေျာ် ဈေးရောင်းနေတဲ့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ဒေသခံဈေးသည်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
''ပုံမှန်ကတော့ အေးဆေးပါပဲ၊ ဧည့်သည်တွေကတော့ ပြန်ကြတာပေါ့၊ ဧည့်သည်ဆိုတာ ပြည်မကနေ လာပြီး အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ သူတို့ကတော့ကြောက်ကြတာပေါ့ ၊ ပျော်ဘွယ်တို့၊ ရမည်းသင်းတို့ မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်ကပေါ့၊ သူတို့လည်း နည်းနည်းစိုးရိမ်ပြီးတော့ သွားကြတာပေါ့၊ အလုပ်လည်း နည်းနည်းပါးတာလည်းပါတယ်၊ အလုပ်လည်းပါးတဲ့အခါကျတော့ မထူးဘူးဆိုပြီး ဆိုင်ကယ်စီးပြီး ပြန်ကြတာပေါ့၊ ဒီမှာကျတော့လွတ်လပ်တယ်လေ၊ သိပ်ပြီးတော့ မတင်းကျပ်ဘူး၊ မြို့ထဲမှာနေတဲ့ ဒေသခံတွေ ရှမ်းတို့ကတော့ ပုံမှန်ပဲလေ''
ကျိုင်းတုံကနေ မိုင်းလားကိုသွားတဲ့လမ်းက တာပင်းစုပေါင်းဂိတ်ကိုလည်း လက်ရှိမှာ ပိတ်ထားတဲ့အတွက် သွားလာလို့တော့ မရဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ဝ တပ်ဖွဲ့က တပ်စွဲထားတဲ့နေရာတွေဟာ မိုင်းလားမြို့ပြင်က တောင်ကုန်းတွေမှာဖြစ်ပြီး ခုချိန်ထိတော့ ပစ်ခတ်သံတွေ မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
မြို့ထဲမှာတော့ မိုင်းလားမြို့ရဲ့ ရုံးလုပ်ငန်းယန္တရားတွေ ပုံမှန်လုပ်ကိုင်နေကြပြီး တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ကုန်သွယ်မှုတွေ ပုံမှန်လည်ပတ်နေတာ တွေ့နေရတယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ မိုင်းလားအထူးဒေသ ၄ နယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် UWSA ရဲ့ တပ်စခန်းတွေကို မနေ့က နောက်ဆုံးထားရုပ်သိမ်းဖို့ အစိုးရတပ်မတော်၊ တြိဂံတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က ညွှန်ကြားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
To my eyes , UWSA ' s leaders think themseves asaLion and try to bully Min Lar and challenge ultimatum of Tatmadaw.
In fact, they is nothing but rubbish rats.
People of Myanmar and international organization ( e.g DEA ) knows very well that " who they are and how they get rich in which way ".
In fact soliders of UWSA is our national brothers and leaders are so called Wa and red gurad communist.
How pity our brother Wa !
Know yourselve and stay under the umbrella of law of Myanmar.
Also understand also that there is only one National Army in every country..
Myanmar Tatmadaw is only one international recognized national army safeguarding our beloved country.
Do not dream to buildasmall country inabig country.
Your dream will never come true.
Oct 27, 2016 01:38 AM